Axmed Madoobe oo maanta ka dhoofay Aadan Cadde xilli uu shirka madasha ka socdo magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Madoobe oo maanta ka dhoofay Aadan Cadde xilli uu shirka madasha ka socdo magaalada Muqdisho
Waxaa subaxnimadii maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka dhoofay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), kuwaas oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Axmed Madoobe iyo wafdigiisa ayaa ka mid ahaa madaxdii ka qeyb galeysay shirka madasha wadatashiga qaran ee ugu dambeeyay oo ay ku yeelanayaan xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Shirkaasi ayaa noqday mid weli la isku fahmi la’yahay qodobo dhowr ah, waxayna taasi keentay in Axmed Madoobe uu dalbado in maalinta ciidda ah uu waqtigiisa lasoo qaato dadkiisa iyo shacabka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa u sheegay madaxda shirka madasha iyo kuwa maamul goboleedyadda kale ee dalka in maalinta Talaadada ah ee soo socota uu dib ugu soo laaban doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, si uu markale halkaasi ugu qeyb galo shirka madasha oo khilaafka xoogan hareeyay.
Dhinaca kale, ilaa iyo haatan lama oga sida uu saameyn ugu yeelan karto maqnaanshiyaha madaxweyne Axmed Madoobe ee shirka madasha wadatashiga qaran, iyadoona sidoo kale shirkaasi uu saakay hore isaga baxay madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas.
Madaxweyne C/weli Gaas ayaa sida la sheegay ka carooday arrinta ku saabsan Aqalka Sare ee gobolka Banaadir iyo dacwad weli daba-taagan xubnihii maamulka Puntland loogu daray, inkastoo markii dambe lagu qanciyay in qodobka Aqalka Sare aan laga saari doonin shirka, islamarkaana ay dib ugu soo laabtaan ka qeyb-galka shirka.